Chii chinonzi service service? | Kugadzira uye zvidzidzo
Chii chinonzi service service?
Maite Nicuesa | 11/11/2021 23:11 | Jobho Kubuda
Pane zvinhu zvakasiyana zvinokurudzira kubudirira kwebhizinesi. Pasina mubvunzo, mutengi, kuburikidza nesarudzo yavo yekutenga, inokanganisa shanduko yeprojekti yekutengeserana. Vanamuzvinabhizinesi nemabhizinesi vanoziva kuti zvakakosha kuti kukosha kweiyo poindi yekutengesa ibatane nevateereri vanotarisirwa.
Naizvozvo, mutengi ari pakati pehurongwa hwekutengesa. Nenzira iyi, sangano rinotarisira vatengi venguva dzose uye, zvakare, tsvaga kugona kusvika kune vanhu vatsva. Basa revatengi ibasa rakakosha nhasi.
1 Personalized rutsigiro panguva yekutenga maitiro
2 Kutaurirana kwakasimba, mutsa uye kunyatsoteerera
3 Kusiyanisa kubva kumakwikwi
Personalized rutsigiro panguva yekutenga maitiro
Nyanzvi dzinoshanda mudhipatimendi iri zvinogadzirisa kusava nechokwadi uye zvichemo zvinobvira nekunyatsobata nguva. Kuperekedza kunogara kupfuura nguva yekutenga kunoitwa. Muchokwadi, mushure mekutengesa-sevhisi inosimbisa iyo brand chifananidzo uye inokurudzira kuvimba nemutengi.
Chii chinoitika kana chigadzirwa chisina kukwana? Chii chinoitika kana chinhu chakasarudzwa chisingaenderane nezvaitarisirwa kare? Munhu anofarira ane nzira yekuonana nayo kugadzirisa chero chiitiko.
Kutaurirana kwakasimba, mutsa uye kunyatsoteerera
Kambani inoda kubatana nevatengi vatsva kuti iwedzere purofiti yayo. Nekudaro, zvinotanga kubva pachinhu chakakosha: munhu wega wega akasiyana zvachose. Naizvozvo, kutarisa kunogara kuchienderana nekutarisa kwemunhu kunonangana nekuteerera kunoshingaira. Mutsa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekushandisa interlocutor. Munhu anoita ongororo yakajairika yechiitiko chekutenga. Urombo husina kunaka hwevatengi hunogona kukuvadza chimiro chechiratidzo kusvika pakukonzera huwandu hukuru hwemashoko asina kunaka pasocial media uye munzvimbo yakatarisana.
Kugara kuripo hunyanzvi munzvimbo yebhizinesi kunopa zvishandiso zvitsva zvinogona kuiswa mubasa revatengi. Uye masocial network muenzaniso wakajeka weizvi, vanopa nzvimbo yekusangana. Kuburikidza neiyi nzira, sangano rinogona kuzivisa avo vari chikamu chenharaunda nezvenhau dzichangoburwa. Izvo hazvina kukosha chete kutarisira avo vatengi vanotenga kazhinji, asiwo avo vanobvunza kugadzwa vasina kuisa odha. Kutariswa kwakanaka kunosiya ndangariro dzinofadza Izvozvo zvinogona kuita kuti munhu wacho adzoke kuchitoro mune ramangwana.
Vatengi vakavimbika ndeavo vanogadzira chisungo chisingaperi nekugadzwa. Vanoumba chisungo chenguva refu. Uye hazvina kukosha chete kupa mhando yekodhi yakagadzirwa neyakasiyana sarudzo yezvigadzirwa. Kuongorora kunoitwa nevatengi kwekutarisirwa kwakagamuchirwa kwakakoshawo.
Kusiyanisa kubva kumakwikwi
Nhasi, mabhizinesi anoratidza kupa kwavo munzvimbo inokwikwidza. Mamwe mapoinzi ekutengesa anotsvagawo kunaka kumutsa kufarira kwevateereri vakafanana. Uye sei kuisa zita rekambani muchikamu? Nzira yekusimbisa sei kusiyana kwako kubva kune vamwe vakwikwidzi? Mhinduro yakanaka, kune rumwe rutivi, inovandudza kushambadzira. Zvipupuriro zveavo vakatotenga mubhizinesi vanogona kukwezva vatengi vatsva.
Basa revatengi rinova chinhu chakakosha kuzadzisa chinangwa. Nechikonzero ichi, makambani anoronga zvinodaidzira sarudzo dzekusarudza vashandi vanokwanisa kuzadza nzvimbo dzebasa revatengi. Dhipatimendi rinodiwa zvakanyanya rinopawo zvakakosha kusimudzira basa uye mikana yebasa. Iwe unonzwa sekushanda muchikamu chiri kukura here? Ipapo, iwe unogona kutungamira kudzidziswa kwako uye kutsvaga kwako basa munzira iyoyo.
Mari inoitwa nemakambani mukushandira vatengi inovandudza purofiti nekuti inoderedza kurasikirwa kwevatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi service service?
Chii chinonzi ophthalmology?